Roobdoon iyo Xadradda Xerta.WQ.Maxamed Xasan ”Alto” – Idil News
Roobdoon iyo Xadradda Xerta.WQ.Maxamed Xasan ”Alto”
Roobdoon iyo Xadradda Xerta
Tuulada Jawaarey, u dhexeeysa degmooyinka Baardheere iyo Saakow, ayaan muddo laba iyo toban bilood (sannad) ah dhibic roob ah ka di’innin. Waxaa rayidkii goobtaas ku noolaa ku dhacay biyo la’aan, dallaggii beeraha oo ka xumaaday iyo xoolihii oo waayay baad ay daaqaan. Dadkii deegaanka deggannaa, intoodii badnayd, waxay u yaaceen xagga tuulooyinka iyo magaalooyinka u dhow-dhowaa.
Maalin maalmaha ka mid ah, niman xer Saalixiya ah oo lugeeynayay, tuulada Daarasalaan oo ka tirsan degmada Baardheere ka yimid, oo magaalada Kismaayo ku sii socdaal ah, goor cadceeddu sii dhacaysay, ayaa tuulada Jawaarey u soo martiyey. Kolkii hore xertii waxay ku horreeyeen masaajidka tuulada oo maqribkii iyo cishihii ku tukadeen. Hayeeshee, cid ‘garoortiin waa meeqa?’ tiraahda ayay waayeen. Fiidkii bay baxeen oo bartamaha tuulada xadro la istaageen. Misana cid u juuqa ayay waayeen.
Masaajidkii ayay dib ugu laabteen. Habeenkii gaajadoodii bay ku seexdeen. Aroortii kolkii salaaddii subax ay jameecada la tukadeen ayay siday wax u jiraan dadkii masaajidka ku cibaadaysanayay xogwaraysteen. Waxay uga warrameen xaaladdooda iyo martisoorid la’aanta heshey. Waxaa loo sheegey in tuuladu ay abaar ba’ani ka jirto oo dadweynuhu baad, biyo iyo xoolo ku filan ayan haysannin, sidaas darteedna martisooriddu ay ku adagtahay.
Baardheere, Daarasalaan, Kor-u-bood, Kudug, Gaagguure ilaa Saakow, iyo guud ahaan aaggii Jawaarey u dhowaa, roob wacani ayaa ka da’ay. Hase ahaatee, iyadu muddo aad u dheer ayan dhibic roob ah ku hoorinnin.
Culimmadii Saalixiyada ahayd ee reer Daarasalaan waxay go’aansadeen in ay roobdoon sameeyaan. Dadkii ayay goob bannaan oo taag ah oo tuulada ka durugsan isugu yeedheen.
Wadaaddadii qasiidooyin roobdoon ah oo qiiro leh oo cod macaan lagu qaaday ayay ku dhufteen. Caddad aad u tiro badan, leh rag iyo dumar, yar iyo weyn, ayaa bartii isugu yimid, iyagoo qofba wuxuu kari karay oo raashin ah keeney. Midi garow meseggo moordi ah bay siddey, mid dhiil caano ah buu sidey, mid muufo ayuu sidey, midi saliid bay siddey, mid biyo buu sidey, iwm.
Saacado kaddib waxaa tuulada Jawaarey soo dulhogatay daruuro wata dhibco waaweyn oo roob ah. Dhowr saacadood oo aan kala go’ lahayn ayuu da’ayay. Bartaas ayaa dadkii ku qabowsaday oo Raxmaddii Eebbe ku heleen.
Wixii rag u kaco Rabbina aqbalo waa rumoobaan
Maxamed Xasan ”Alto”
Helsinki, Finland, 19.07.2014